Qorfe weli keligiis buu yahay: Manjaro wuxuu ku sii deyn doonaa daabacaaddiisa miiskan | Laga soo bilaabo Linux
Buugga Isha | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Qaybinta, GNU / Linux, Noticias
Shalay waxaan ka faallaynay warkaas Cinnaar, qaybinta ku saleysan Arch Linux con Qoraxda sida jawi desktop ah, Waan ka tagayay tan fargeeto ah u guurid GNOME Shell. Maqaalka aan u soo jeediyay Manjaro Cinnamon Edition Edition bedel suurto gal u ah Cinnaar kuwa raadinaya qaybinta kale oo ku saleysan halka con Qoraxda.
Hagaag, waad iska hilmaami kartaa talo bixintaas maxaa yeelay Manjaro ayaa hadda ku dhawaaqay in daabacaaddan hubaal la joojiyay. Ku dhawaaqida tan waxaa loo sameeyay si layaableh intii lagu jiray bandhigga Manjaro Cinnamon Edition Edition 0.8.5, ayaa la bilaabay shalay taasna waxay noqon doontaa tii ugu dambeysay ee ay soosaaraan iyagoo leh fargeeto ah de GNOME Shell. Ujeeddooyinka? La mid ah kuwa Cinnaar: Awood la'aanta in la ilaaliyo desktop-ka horumarineed sida gaabiska ah Qoraxda on distro ah oo had iyo jeer waa sida ugu dambeeyay ee ay tahay Arch Linux. Iyada oo tan kaliya ay tahay laba disros (inta aan ogahay) oo ku saleysan halka in ay bixiyeen Qoraxda horay loogu rakibay sidii caadiga ahayd.
1 GNOME 3.8: dambiilaha dhabta ah
2 Qorfe iyo horumarkiisa gaabiska ah
3 Dhamaadka qorfe ka baxsan Linux Mint?
GNOME 3.8: dambiilaha dhabta ah
Qoraaga ka dambeeya kala goynta udhaxeysa desktop-ka uu abuuray Linux Mint iyo qoyska distros halka waa mid kale oo aan ahayn isku mid GNOME. Nooca 3.8 Desktop-ka Miguel de Icaza hadda wuxuu ku jiraa bakhaarada Imtixaanka ee Arch Linux waxaana lafilayaa inay bilawdo gelitaanka kanaalka xasilan maalmo yar gudahood. Dhibaatadu waxay tahay in wiilasha GNOMEmarkasta muran badan Waxay gabi ahaanba iloobeen iswaafajintii gadaal ee GNOME 3.8 iyo noocyadeedii hore, markaa dhamaan xirmooyinka adeegsada maktabadaha iyo API-yada noocyadii hore waxay noqon doonaan kuwo aan la adeegsan karin. Tani waa kiiska Qoraxda, taas oo ku jirta nooca ay hadda tahay 1.7 kaliya ay taageerto ilaa GNOME 3.6.
Natiijadu waxay noqon doontaa in sida GNOME 3.8 kaalay, kaas oo qarxiyay atomiga baabi'in doonaa wax kasta oo qorfe firfircoon ku dhejiya Arch Linux.
Qorfe iyo horumarkiisa gaabiska ah
Intaas oo dhan su'aasha ayaa weli ah: sababta Qoraxda ayaa ilaa hadda ka dambeeya horumarka ah GNOME? Maxaad u taageeri weyday nooca 3.8 wali? Jawaabta isagaa bixiyay Clement lefebvre maalmo ka hor: maxaa yeelay iyaga daruurtooda looma baahna. Cinnamon kuma dhalan mashruuc madaxbanaan oo Linux Mint ah, bilawgii waxaa loo qaatay inuu noqdo desktop-ka distoorkaas iyo wax kale. Hadday walxaha kale ee loo yaqaan 'distros' ay ku dhammaystireen inay u wareejiyaan bakhaarradooda waxay sabab u ahayd inay go'aansadeen inay sidaa sameeyaan, laakiin qorfe looma samayn taas.
Iyo in Buoni ma laha hammi ay qaadaan Qoraxda a GNOME 3.8 maxaa yeelay meelahooda kaydka, iyo sidoo kale kuwa qoyska oo dhan Ubuntu, wali wey lajiraan GNOME 3.6 waxayna ku qaadataa waqti dheer inay helaan nooca cusub. Xaqiiqdiina markay ugu dambayntii timaaddo mar hore ayaa la bilaabi lahaa GNOME 4.0, iyo wixii la mid ah, marwalba hal talaabo dib.
Dhamaadka qorfe ka baxsan Linux Mint?
Marka maxaa dhici doona Qoraxda hada kadib? Xaqiiqdii ma ogi haddii ay jiraan wax xal ah, laakiin duruufaha degdegga ah ayaa sidaas noqon doona waxay bilaabi doontaa inay ka baabi'iso dhammaan meelaha waxsoosaarka halkaasoo uu imanayo GNOME 3.8. Marka hore waxay noqon doontaa sii daayo sida halka (xirmooyinka Qoraxda wali waxay kujiraan AUR laakiin laga yaabee inay dhawaan hawlgab noqon doonaan ama ugu yaraan la calaamadeeyay inay duugoobeen) mar dambena semi-rogid iyo dhammaan kuwa doonaya inay ku sii hayaan noocyadii ugu dambeeyay ee xirmooyinka bakhaarradooda.
Dhamaadka waxay umuuqataa in qofkii raba inuu isticmaalo Qoraxda miis ahaan waa inaad ku nagaatid Linux Mint iyo meelaha kale ee loo yaqaan 'distros' kale waxaan haysan doonaa hal ikhtiyaar oo ka yar oo aan ka kala dooran karno.
Via | Aad u Linux
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Qorfe weli keligiis ayaa hadhay: Manjaro wuxuu ku tirtiray qoraalkiisa miiskan
80 faallooyin, ka tag taada
Taasi waxay ku dhacdaa miisaska leh dayactireyaal yar.
Kubadda barafka wuxuu bilaabmaa inuu weynaado. War xun qorfe.
Waan saxaa faallooyinka, dadka isticmaala Cinnamon.
Hagaag, sidii ay horey u yiraahdeen, Qorfe waa midnimada lint mint
Waxaan horey u iri shalay
Qorfe Abidkeed Keliya Qoraal….
iyo su'aasha milyanka dollar ah, ee loogu talagalay netbook keebaa laga doortaa desktop? lxde iyo xfce ima qancin karaan, sanduuqa furfuran ayaa kafiican laakiin shaki la'aan qorfaha wuxuu ahaa ikhtiyaarkii ugu weynaa ... saaxiibkiisna si isku mid ah ayuu ugu dhici doonaa?
pixie ah dijo
Xfce waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee jira, sida lxde oo kale
Gnome iyo Kde xoogaa wey cuslaan karaan
Ku jawaab pixie ah
Waan taageersanahay, inkasta oo qorfe sidoo kale xoogaa culus yahay hadana kuma talin lahaa isticmaalaha netbook
Waxa kaliya ee aanan ka helin LXDE waa astaantiisa: S.
LXDE ama OpenBox waxay ku fiican yihiin netbook.
Weli ma fahmin sababta ay dadku u tuuraan DE-da dhammaystiran uguna nadiifsan maanta, KDE.
Qaab-dhismeedkeedu wuxuu u oggolaanayaa inuu la jaan-qaado kombuyuutarrada yar-yar (Ugu yaraan iyadoo la raacayo shabakad Manjaro ah oo lagu rakibo ISO waxaan ku guuleystey inaan ka dhigo mid ku shaqeeya xawaare aad u wanaagsan oo ku socda Acer One oo leh 1 GB oo RAM ah).
Sidoo kale, haddii taasi aysan ku filnayn, fiiri mashruuca KLyDE (Sarkaalka KDE).
Waxaad ubaahantahay barashada qaabeynta LXDE iyo XFCE, waa inaad aragtaa isbedelada lagu sameeyay iyaga, ka raadi internetka, qaarbaa kafiican xitaa KDE.
Tani waa wax ay dhaleeceeyeen dad badan iyo horumariyayaal, oo ay ku jiraan Clem Lefevbre: GNOME waxay wax ka bedeshaa waxyaabaha udhaxeeya noocyada, sii deyn kastaa waxay la mid tahay tijaabo waxaanan danaynaynaa la jaanqaadka "codsiyada xisbiga saddexaad". Isticmaalayaasha GNOME way iga raali noqon doonaan, laakiin mashruucan wuu nuugayaa.
Maalinta ay tahay inaan ku noqdo Gtk waxaan isku halleynayaa Xfce markale. Waxa intaa ka sii badan, waxaan jeclaan lahaa inaan u soo jeediyo horumariyeyaashaada inay adeegsadaan maktabado kale oo aan ahayn Gtk, laga yaabee kuwa E17 ama Qt.
KDE, maalin kasta oo dhaafta waan ku jeclahay adiga ... waxbadan.
Iska ilow soo jeedinta bakhaarada kale ee buugaagta. Iyagu ma leh madadaalo dib-u-qorista Xfce oo xoqan.
Waan ku raacsanahay, waad ku waafaqi kartaa ama ma aqbali kartaa go'aamada qaarkood, laakiin waqtiga ayaa cadeeyay xuquuqda saxda ah ee ku saabsan waxyaabaha laga helo GNOME.
Ujeeddooyinka Canonical waxay ujeedadeedu tahay inay abuurto muraayad sii kordheysa oo GNOME-madax-bannaan, waana arkaa sababta.
+1 Wixii aan ku arko Qt waa wadada ... U_U
Waan idhi waanan ku celin doonaa:
Gnome ma xiiseynayo la shaqeynta fargeetooyinka ay kuwa kale ka sameystaan ​​saldhiga Gnome…. Gnome wuxuu leeyahay qorshayaal kale oo uu deegaanka ugu beddelayo nidaamkiisa hawlgalka ee loo yaqaan GnomeOS.
sidaa darteed waxay leeyihiin shaqo socod FAST iyo horumar mana iska dhigaan inay gadaal fiiriyaan oo ha sugaan kuwa kale ee sameysanaya mudacyada inay qabsadaan maadaama ay yihiin ragga Gnome.
Gunaanad: Haddii aad rabto inaad isticmaasho walxaha GTK, isticmaal Gnome Shell oo ha u isticmaalin mudacyadiisa
Dhibaatadu waxay tahay, inta GNOME rabto inay lahaato GNOME OS, codsiyo badan oo Gtk ah ayaan si toos ah ugu xirnayn mashruucaas. Waxaa intaa dheer, waxaan dhihi karnaa hadda waxa GNOME leeyahay:
- Totem (Ma garanayo waxa cadaabta loogu yeedho imika)
Sikastaba, iyo inta kale ee araajida ah ee laga dhex heli karo mashruuca ee aan ku celiyo: Iyagu ma badna, mana aha kuwa ugu fiican ... Marka maxay ku saabsan yihiin? Haddii ay dhabarka u jeediyaan dhammaan codsiyada halkaas yaal ama aysan fileynin inay la jaan qaadayaan iyaga, waxaan arkaa iyaga oo aad iyo aad u fara badan.
Waxaa lagu magacaabaa LOOL Video, maahan kaftan xd
Waa hagaag taasi waa isla xishood leh magac kale .. Waxaan ku sii wadaa SMPlayer / MPlayer, VLC iyo xitaa Dragon Player ..
Ciyaaryahan kasta wuu ka fiican yahay totem, masduulaaga maslaxa haddii aad isticmaasho phonon vlc ama xine si fiican ayuu iigu shaqeeyaa. In kastoo aan gnome mplayer ku toogto mplayer2
Waa run, sidoo kale ha walwelin, codsiyada badankood wali waxay ku jiraan Gtk2 mana qorsheynayaan inay u gudbiyaan Gtk3, halkaas waxaan ku leenahay tusaale ahaan Firefox-ka weyn.
Halkan ayuu soo maray dijo
intee le'eg ayey u egtahay qaraabadooda, waxay sii wadaan bixinta nooc 6dii biloodba mar https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME#Versions (march, september) sida ubuntu.
In aysan rabin wada shaqeyn waa arin kale (iyadoo u janjeera in aysan aqbalin waafaqid dib udhac ah, adwaiata waa la arki karaa), oo kaliya ma ahan qaladka gnome, sidoo kale waa fargeetooyinka, marka laga eego aragtida sheyga. ma aha inay ahaato mid aad u xiiso badan inaad wax ka beddesho dhowr maktabadood (taas oo ah suurtagalnimada aad haysato) oo aad u kobciso sidii shey kale Ma liidayo wax DE ah, laakiin way fududahay, qof kastaa wuu dhaleeceeyay oo wuxuu yidhi aan samayno fargeeto kale, laakiin sidii horeba loo yidhi, haddii aad rabto inaad buuxiso, waa inaad ku aragtaa iyaga oo leh dhammaan maktabadaha halkaas ku yaal iyo haysashada, haddii dadku way arkayaan Haddii uu dhaleeceeyo, wuxuu la fadhiisan lahaa dhinaca kuwa wax dhisa si firfircoon (ugu yaraan email ahaan), xaaladdan ma dhacday, oo dhammaan dadka ka horreeya mashaariicda waa bini'aadam waxayna u falceliyaan sida oo kale, dareenka marka loo eego waxa ay ku arkeen dhexda (laakiin ogaada inay jiri karto ama aysan jiri doonin gacan aan la arki karin gadaasha). Waxaan rajeyneynaa mustaqbalka xaaladdan in dib loo rogi doono, laakiin tan dhowr arrimood waa inay isbeddelaan oo dhowr tartan aan micno lahayn oo la kobciyey sannado yar ay tahay in dhinac la iska dhigo.
Waxaan rajeynayaa inaan si khaldan la ii fasiran, si aan ugu rakibo midnimada qaansoleyda waa inaan kala doortaa gnome iyo midnimada xilligan, laakiin waa go'aankeyga, inaanan isticmaali karin gnome 3.8 [gnome-xasilloonida] ku jira tijaabinta, sidoo kale ma isticmaali karo xorg 1.14 (sidoo kale imtixaanka), waa go'aankeyga
Kajawaab halkaan ku ag marayo
Taas awgeed, waxay u beddelaan qaabka lahaanshaha waana taas ...
GNOME-kan iyo fargeetooyinkiisa ayaa durba cirka u ooyaya. Horay u soco oo iska dheji GNOME; haddii LXDE, XFCE iyo KDE ay jiraan, waa deegaanno ku jira xaalado aan sii qasnayn oo ku siinaya qalab shaqo oo dhab ah. Runtii, GNOME-kan iyo fargeetooyinkiisa ayaa durba xuduud ku leh qosolka.
Waan jeclaa gnome 2, mana jecli Gnome Shell, LXDE, XFCE, KDE, ama Unity
Iyo maadama aanad matte isticmaalin, waayo aragnimadu waxay lamid tahay 95% tan gnome 2. Dhamaan casharrada gnome 2 casharradu waxay iigu adeegeen matte markaan isticmaalay.
aan aragno, waxyaabaha sida ay yihiin, waxaad seegtay waa COMPIZ, muddo, marka yaan la isku qaldin waxyaabaha. Qofna ma isticmaalin GNOME 2 bilaa xisaab ah; mise waan qaldanahay taasi waa waxa kuu xiisay
Waxaan rajaynayaa inay runti taasi tahay iyo suurtagalnimada wax ka beddelka baararka maxaa yeelay haddii kale ma fahmin. GNOME2 wuxuu ahaa uun qashin fuud ah ...
Waxaan u maleynayaa inaad ku garaacday cidiyaha madaxa faallooyinka, waan u xiisay iskudhafka 🙁
Xitaa gnome runtii wuu nuugaa mar hore, tan iyo markii gnomeshell la hirgeliyey; kumbiyuutarrada dhammaadka-hoose (sida tayda oo kale) ayaa nuugaya! Runtii ma shaqeynayso, waxaan siinayaa fursad LXDE, XFCE
Ku jawaab dasht0
RUNTA !!!!! Weligay ma jeclayn qorfaha, waxaan ku sii wadaa Mate oo si fiican u shaqeynaya iyo Manjaro 🙂
Ku jawaab july
isku duubnaan0 dijo
Gnome wuxuu noqday xiriirka burburka xiriirka tan iyo markii la sii daayay Gnome 3.
Uma maleynayo inay tahay ciladda qorraxdu inay "ka dambaysay", maxaa yeelay haddii aan isbarbardhig samayn lahayn waxaan ku eedeyn lahayn Debian is waafajin badan (waxaan arkaa garaac soo dhowaanaya haha).
Ka takhalusida iswaafajinta dib udhaca waxay la mid tahay aaminaadda in qof walba u dhimanayo isticmaalkiisa iyo inay iyagu yihiin taliyayaasha adduunka desktop-ka.
Waxaan doorbidayaa MATE, waa wax fiican, iftiin wuxuuna ku socdaa wadada saxda ah, waxaan qabaa.
Ku jawaab isku duub0
[elav waxay diyaarisaa fiidmeerka hooyo]
Ma aqaano bro, waxaan u maleynayaa inay labaduba khaladkooda yihiin, LM waa inuu tixgeliyaa taas kahor intaanan u dhaqaaqin biyo qoto dheer oo qallafsan. Tusaale waxaa u ah in qorfe uusan shaqeysan iyadoo aan ku xirneyn Nemo ama in aysan laheyn shaqaale ay ku fuliyaan mashruuc baaxadiisa leh. Dhinaca kale, LM wuxuu khaladka ka dhigay qalad, wuxuu ka tagay LMDE oo wuxuu u baxay Cinnamon ... "Waxaan raadinayaa jajabka halkii rootiga oo dhan." #PicFail.
Hadda LM waa inuu taxaddar yeeshaa, Mate waa shaqadiisa labaad ee weyn, sidee buu faa'iido u yahay? Uma maleynayo wax badan, daqiiqad kasta mashruucu wuu fadhiistaa oo LM waxba ma tarayso. Maalmihii qorfe waa la tiriyey, muxuu LM noqon doonaa iyada oo aan taajkiisa dhejiska lahu? Mid ka mid ah distoorka oo leh farshaxan kala duwan? Sidee is burinayaa, laga bilaabo noqoshada lambarka 1aad ee loo yaqaan 'Distrowatch' ilaa halista ah in aakhirka loo noqdo wax wanaagsan oo noqon kara waligiisna ahaan doonin? Khaladaadka waa la bixiyaa oo LM ayaa qaali ku noqon doonta suxuunta jaban ...
Bro, sidoo kale waxaan halkan kuugu sheegay:
Ubuntu iyo Linux Mint labaduba waxay qaateen GNOME markii loo eego markii mashruucan xasilloonaa. Xasiloon macnaha ah in aysan beddelin API-keeda si joogto ah iyo nooca kadib markii la beddelay, kaliya isbeddelada yaryar ayaa dhacay.
Si aad u fahamto aragtidayda, waxaan ku siinayaa tusaale fudud: Aynu nidhaahno waxaad tagtaa dukaanka oo soo iibso Laptop, kaas oo xilligan la shaqeeya dhammaan darawallada hadda jira iyo kuwa kale. Berrito soosaarayaasha Kernel ama qaar ka mid ah softiweerrada waxay go'aansadeen in aysan mar dambe la jaan qaadi doonin Laptop-kaaga.Ma khalad baa shirkadda soo saaraha qalabka in wixii ay kaa iibinayeen mustaqbalka uusan ku shaqeyneyn waxa Software-ka aad isticmaasho?
Waa hagaag, qorfe waa qalabka iyo GNOME ee software-ka, oo lagu arkay macnaha guud. Mark iyo Clem waqtigaas waxay sharad ku galeen shay shaqeeyay .. Laakiin waxaan durba aragnay isbeddelada, Midnimo waxay u socotaa Qt, Qorfe ama wey isbeddeleysaa ama maktabado ayaa beddeleysa .. taas waa la arki doonaa.
Ma jiraa qof shaki ka qabaa in LM ay tahay distro la buunbuuniyey inay ku hayso meeshaas?
Dhab ahaan, waa distro aan xitaa lahayn keydad u gaar ah, leexashada ubuntu (dareenkaas) ...
Ma arko sababta loo ilaalin karo distro gaar ah oo leh qorfe, haddii mid ka mid ah ay qaadato 2 daqiiqo in lagu daro qoloftaas manjaro
Waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan qoro dhammaan qoraaladeyda oo oranaya: «Miguel, haddii aysan dhib badan lahayn, fadlan akhri maqaalka oo dhan intaadan faallo bixin, mahadsanid.» Aniguna waa inaan isla cinwaankaas dhex dhigaa maxaa yeelay haddii kale ma arki doontid. 😀
Waxaan aqriyay dhowr nacas oo sheegaya in qorfe la waayi doono.
Kuwa sidaa ku hadla waa qaar qiiqa iibiya.
Qaar ka mid ah MIDNIMADU waxay yiraahdaan isla «» »Inay baabi'i doonto« », joojiso dabeecadaha carruurnimada oo weynaato.
Waxay u egyihiin qaar gabdho duug ah oo deriska ah oo si xun wax uga sheegaya deriska una rajeeya kan ugu xun maxaa yeelay haa.
Haber, haddii halkii ay maalintii oo dhan ka hadli lahaayeen ay ka caawiyaan koodh si loo helo mashruucyo bilaash ah oo software ah.
Marka loo eego GNOME waa markab bilaa shaandheyn, maalin maalmaha ka mid ah GNOME waxay rabeen inay dilaan Gnome Classic maalin kalena waxay dhahaan wax kale oo ka soo saar sanduuqa dhintay.
GNOME malahan fikrad go'an mustaqbalka, taas oo xal u siisa horumariyeyaasha, waxay umuuqataa inay sameysay wax kasta oo suuragal ah si loo carqaladeeyo nolosha horumariyeyaasha kale.
[Waxaa laga qoray Windows sababo shaqo]
Waxaan isticmaalaa Debian mana aanan ka soo horjeedin fargeetadan marka laga reebo dib u dhaca ay ku leedahay jawiga desktop-kan. Maxaa intaa ka sii badan, waxaan ka door bidaa MATE-ka is-dhexgalka beenta ah ee KDE.
Wixii ku saabsan GNOME 3, waxaan go'aansaday inaan ku beddelo MATE marka Debian 7 (Wheezy) soo baxo, maadaama ay badbaadineyso waayo-aragnimadii wanaagsanayd ee GNOME 2 iga tagtay iyo sidoo kale, waxaan dareemayaa aad iyo aad ugu raaxeysashada sida is-dhexgalka iyo iftiinka noocan oo kale ah sida GNOME 2 iyo XFCE (in kasta oo KDE ay u dhowdahay mid culus sida Windows interface-ka, laakiin way ka fiicnaanaysaa markay timaado xasilloonida).
Sikastaba, waxaan ka baryayaa in MATE si rasmi ah loogu daro Debian xasilloon oo runti ay soo celiso wixii GNOME ilaaway. Waqtigaan la joogo, waxaan la socdaa cusbooneysiintayda 'Debian Squeeze update' 7.
Qorfe waa inuu joojiyaa ku tiirsanaanta Mint, qorfahaas ku yaal meel ku-meel-gaadh ah wuxuu u muuqday sidii fikrad wanaagsan aniga. Laakiin softiweerku wax walba maahan oo waa inaad xusuusataa inay wax walba ku jiraan nuxur muhiimna ay tahay bulshada.
Sida iska cad waxay kaliya dileen Cinnarch oo dabiici ahaan waxay qaadan doontaa magac kale.
Waxaan u maleynayaa in ugu dambeyntii qeybintaasi ay xal u heli doonto oo ay samayn doonto fiditaanno gnome 3 ah.
Inkasta oo distros sida Manjaro, ArchBang, Cinnarch, Chakra ay soo jiitaan indhahayga, waxaan u maleynayaa in dhamaadka wax walba ay ka adag yihiin sidii ay ahayd. Waxaan door bidaa inaan fududeeyo. Ay T…
Hagaag, waxay ila tahay war xun aniga, tan iyo markii gnome 2 Cinammon naga tagay, waxay ahayd jawiga aan ku dareemay raaxada ugu badan. Waan jeclahay Kde sida desktop caalami ah, laakiin waxay igu adkeyneysaa mustaqbalka fog. Waan jeclahay Xfce laakiin sifiican uma raaxeysto. LXDE ama iftiin ayaa aniga cagaar iila muuqda. Midnimada ama qolofta 'Gnome' waa wax aan macquul aheyn inaan la shaqeeyo. Sikastaba, waxaan u maleynayaa inaan yeelan doono dad badan oo ihaaneeya laakiin waxaan jeclahay Cinammon waxaana rajeynayaa inay leedahay mustaqbal ka wanaagsan inta ay saadaalinayaan.
Ku jawaab Matthews
Waxaan u maleynayaa in Gnome uu dhintey markii uu u booday nooca 3. Tan iyo markaas waalaga indha tiray, isagoo qaatay go'aano aan la fahmi karin, waxaa loo dhaqaajiyey iyadoo lagu marmarsiyoonayo hal-abuurnimo, laakiin waxay kaliya ku guuleysteen jawi qariib ah, wax kasta oo aan ahayn dareen iyo dib-u-habayn. Iyo aragtidan (ee ah inaanan taageerin qoraalkii hore, oo aanan ka warqabin), waxaan u maleynayaa inay tahay cawskii awrta dhabarka ka jebiyey. Waxay ka dhigan tahay khiyaano isticmaale.
Maxaa dhacay qorfe? Horaad u qabowday.
[Waxaa laga qoray Windows sababo shaqo].
Waxaan la yaabanahay maxay tahay ujeedka sameynta fargeeto deegaan oo hadda jira lana cusbooneysiiyo? In kasta oo Gnome uu weli ku jiro horumar buuxa, maxaa lagaa doonayaa markaa? Daahiyo horumarkaas si fargeeto farxi? Waxaan qiyaasi karaa kulan dhex mari doona kuwa horumariya mid iyo tan kale: - Qorfe: «hey, Gnome, ha horumarin weli maxaa yeelay haddii kale horay uma socon karo»; - Gnome: «Waa hagaag, qorfe, waa hagaag, horay ugama socdo si aad waqti ugu qaadato inaad isku hagaajiso naftaada»….
Khibrada ka dhacda qorfaha iyo Gnome Shell way ka duwan yihiin, sidaa darteed fargeetadan ayaa sababteeda leh, iyada oo la siinayo miis dhaqameed dhaqameed teknolojiyad cusub leh.
Hadda, waxay u muuqataa in dhibaatadu tahay in iswaafajinta API-da laga bilaabo GTK 3.6 ilaa GTK 3.8 ay jabtay, waa wax aan habboonayn inay dhacaan, maadaama GNOME keliya aysan isticmaalin GTK, laakiin ay jiraan mashaariic badan oo madaxbanaan GNOME oo iyaguna adeegsada. Waan ku raacsanahay in GNOME aysan aheyn inuu sugo dadka kale, laakiin uma maleynayo inay jirto baahi loo qabo in lagu jabiyo API qayb kasta (taxaddar, anigu ma ihi barnaamij-yaqaan ama wax uun, tani waa aragtidayda oo keliya).
+1 Taasi waa waxa aan ula jeedo.
@cookie iyo elav: Waxaan u maleynayaa inay labaduba khaldan yihiin. Ma ahan fikrad wanaagsan in fargeeto wax unbaa soo kordhayaa. Haddii qorfe loogu talo galay inuu sameeyo fargeeto si ay uga wada shaqeyso dhammaan qeybinnada, waa qalad weyn, sidaas darteedna waxaa jira dib-u-dhacyo ka tagaya. Fargeeto caqli badan ayaa ah Mate, tusaale ahaan, taas oo loo sameeyay inay soo celiso Gnome 2.x oo u dhowaa "la duugay".
Waxaan ku laabaneynaa isla, runti ma lagama maarmaan baa in la jabiyo API si loo horumariyo? Hadday sidaas tahay, GNOME runti ma loo tixgelin karaa mashruuc xasilloon (waxaan ula jeedaa xasilloonida ururkiina mashruuc ahaan) Sideed u malaynaysaa inuu qof barnaamij u samayn doono isagoo adeegsanaya maktabadaha GTK 3 haddii iswaafajintu ay kala jaban tahay nooc kasta?
Waxyaabaha kale, Clem wuxuu yiri in qorfe uusan aheyn mashruuc madax banaan oo LM ah (boostada waxaa kuxiran xiriirin taas lagu xusay, hadii aad rabto inaad aqriso), taas oo ah, looma jeedin inay ka shaqeyso dhamaan qeybin sida aad sheegeyso .
@cookie: «… Clem wuxuu yidhi Cinnamon maahan mashruuc ka madax banaan LM…»
Taas oo ah, dooda oo dhan fargeeto ama fargeeto gebi ahaanba waa wax aan faa'iido lahayn, iyo, sida ay halkaas ku yiraahdeen, dhamaadka Cinnamon waa in LM waxa Midnimada loo diro Ubuntu, iyo haddii aysan ka madax bannaanayn waxa Clem sheegay, ka dibna inta kale distros waxay si fiican u qabtaan inaysan ku dhex darin kombuyuutarradooda. Kadibna waxay dhaleeceeyaan Gnome? Goorma ayuu qoloftaada ka dhex shaqeynayaa dadka kale oo dhan?
Oo halkan ayaan mar labaad ku soo galeynaa, in haddii fargeeto iyo haddii kale. Taasi waa in la yiraahdo, sidaan bilawgiiba ku idhi, dood bilaa macno ah, iyo in Clem uu isku barayo qorfe meesha ugu raaxada badan ee ku habboon isaga….
Waxay u egtahay inaad dhahdo "Qorfe waa LM waxa Midnimo u ah Ubuntu", sidaa darteed fargeetadan GNOME Shell macno ayey samaynaysaa, illaa iyo inta ay ku dhex jirto Mint. Tani waxay ahayd jawaabta aan rabay inaan siiyo su'aashaada:
«… Waa maxay ujeedka laga samaysanayo fargeeto jawi hadda jira oo la cusboonaysiinayo .. ..»
Oh, by the way, anigu ma necbahay GNOME, dhab ahaantii waxay qabataa indhahayga; aadna ugama farxin inay ku daraan Cinnamon diro kale dhibaatooyinka noocan ah.
Hagaag, hada hadaan heshiinay, waxaan kula hadlay madaxayga dhanka kale. Heh, iyo in laga fikiro in qayb ka mid ah kooxda Fedora ay tixgelin siinayaan Cinnamon marka loo eego, inkasta oo haddii ay maareeyaan inay si fiican u shaqeeyaan, kooxda Clem waa inay helaan lambar ay ku qaataan fasalo qaar ...
Waxaan u arkaa faalladaada hoosta mid aad u doqon ah.
«» »Iyo in laga fikiro in qayb ka mid ah kooxda Fedora ay ka fikirayaan inay Cinnamon iska dhigaan, laakiin haddii ay maareeyaan inay si fiican u shaqeeyaan, kooxda Clem waa inay helaan lambarro ay ku qaataan fasallada qaarkood ...« »»
Haddii horumariyeyaasha Fedora ay ku hirgeliyaan CINNAMON Fedora, taasi waa sababta oo ah way jecel yihiin.
Fikradda CINNAMON waxay ku dhalatay Linux Mint.
Sababtoo ah haddii kale barnaamijyada Fedora waxay sameyn lahaayeen fargeeto la mid ah CINNAMON waqti hore, taas oo aysan sameynin.
«Ma ahan qof kale oo aan ahayn GNOME laftiisa. Nooca 3.8 ee desktop-ka Miguel de Icaza », Waa run in ninkan, madaxa waardiye ee jajabka deegaanka desktop-ka, uu ii garaacayo sida laadadka kubbadaha, iyadoon loo eegin nidaamka qalliinka ee uu adeegsado iyo / ama ama macno darrada uu ka sii daayo afkiisa, laakiin ka soo baxa halkaas si loogu canaanto xumaanta Gnome 3.8 iyadoo la xuso magaciisa oo kaliya in lagu tuuro wax aan la aqbali karin. Vicent waxay noqon laheyd musharax aad ugufiican truño la hor dhigo taageere. Haddii aan khaldanahay oo aad xusayso waxay ahayd inaan ku siiyo sumcad, markaa Federico Mena ayaad u samaynaysaa xumaan.
Dhinaca kale, tani waxay ahayd wax la arki karay oo soo socota, oo leh shaashad ka timid distro, in waxa kaliya ee ay ogtahay sida fiican loo sameeyo (ma dhahayo waa waxa kaliya ee ay qabatay), waa ka faa'iideysiga shaqada dadka kale (Ubuntu, Debian, gnome).
Waxay u muuqataa in khaladka oo dhami ay ku xiran tahay Gnome jabinta qafiskooda, oo uusan ku xirnayn visoñez ee soosaarayaasha u adeegsaday bey'adan horumar firfircoon iyadoo aasaas u ah tooda (egos buuqsan iyo xanaaq daran ayaa ah laba nooc oo ay aad ugu badan yihiin adduunyada barnaamijka bilaashka ah).
Milicsiga kama dambaysta ah: Weli waa wax la yaab leh in labada qoraal ee ugu dambeeyay ee ku saabsan qorfe ee boggan ay la yimaadaan dib u dhac yar saacadda 2 oo lagu sii daayay Linux aad u badan, labaduba waa qoraaga isku mid ah iyo fikradaha lagu muujiyey labadaba wax badan kaga duwan kuwa lagu daadiyay maqaalada asalka ah. El de la Fuente meeye ayuu ka cabayaa?
Ha u arkin shirqoolada meesha aysan jirin, waxaan dhahay "Miguel de Icaza desktop" si fudud si aanan u dhihin GNOME mar kale oo aan uga dhigo mid aan badneyn, sidaan ku iri "desktop-ka ay sameysay Linux Mint" ma dhahayo Cinnamon, ama "the Arch family distros »inaan la dhaho Cinnarch iyo Manjaro. Hadana haddii aan doorto inaan xuso Icaza waxay ahayd maxaa yeelay isagu waa kan ugu caansan aasaasayaasha aqrista kastaana wuu ogaan lahaa wuxuu ka hadlayo, WAXBA KALE
Sida ilahayga, waxaad ku arki kartaa dhamaadka qodobbada, ma aha wax qarsoodi ah. Waxaan ku bartay wararkii hore anigoo aqrinaya Somos Linuxeros; runti, ma aanan arkin maqaalka MuyLinux ilaa aan daabacay ka kaygii (waa lay qorey laakiin maanan galin Google Reader maalintii oo dhan). Aniguna waxaan ku ogaaday warkan akhrinta MuyLinux oo aan si sax ah u xusay.
Ma arko sida maqaalku isku mid u noqon karin haddii aan ka faalloonno isla dhacdooyinka. Si kastaba ha noqotee, haddii aad akhrido faallooyinka maqaalkii hore waxaad arki doontaa in dhowr ka mid ah fikradaha lagu soo bandhigay maqaalkan aan horeyba ugu soo sheegnay halkaas waxayna u muuqatay fikrad wanaagsan in la isku daro si loo dhammaystiro mawduuca.
Gnome waa BOQORKA .. Haddii kuwa kale aysan rabin inay ku raacaan, wax u samee sida aad rabto. Tan iyo markii dhibaatadu gnome tahay marka xaqiiqda dhabta ahi ay tahay nuqulada la beddelay ee aan raaci karin.
Jawaab Fernando A.
In kuwii dhintay ay keligood hadheen ...
Hagaag, haddii aan dooneyno inaan ka faa'iideysanno Cinnamon fiiri Linux Mint, haddii kale iska casileyno xulashooyinka hadda jira.
Sikastaba, runta ma aqaano maxaa yeelay halkii aan ka sameyn lahaa "midow" dhamaan horumarayaashaas oo dhami waxay ku dhamaanayaan sameynta mashruuc kasta iyo fargeeto hal shay oo kan kale ah waana taas sababta aan aaminsanahay inay u kala jabantahay ..
Ilaa hadda mashruuca kaliya ee aan arko midaysan, dhammaystiran oo aan dhammaystirnayn waa KDE.
Laakiin waxaan doorbidayaa deegaan aad uyar sida LXDE ama distro asii sida Crunchbang 😀
Tan awgeed: https://blog.desdelinux.net/introduce-el-titulo-alarmista-aqui/
Si dhakhso leh loo dhammeeyo, la shaqeynta GNOME waa wax aan macquul aheyn. Waxay sameeyaan waxay rabaan, ma dhagaystaan ​​ra'yiga, xitaa tabarucaadka koodhka lama soo dhaweynayo.
Waan ku raacsanahay inaysan ahayn inay ahaadaan foori laakiin kaliya sababtoo ah waxaa jira miisas badan oo kafiican oo looma baahna in waqti lagu lumiyo. GNOME mar buu fiicnaa laakiin maanta wax kale ma ahan qashin.
In deegaan aadan jecleyn, Manuel, aysan macnaheedu ahayn inay qashin tahay, ujeeddo aad u yar baad leedahay. Waxay leedahay cilladaheeda, waa run, laakiin laga bilaabo halkaas illaa qashin waxaa jira fiditaan aad u dheer. Waxaan ka dhihi karaa wax la mid ah KDE maxaa yeelay ma ahan wax aan ugu jeclahay, mana ihi sababta oo ah, sida dadka kale oo dhan, waxay leedahay faa'iidooyinkeeda iyo waxyeellooyinkeeda. Adiga hada khatar malaha.
Waxay leedahay adeegsi 0, API-yada ayaa jabiya cusbooneysiin kasta, waxay sii wadaan qaadashada xulashooyinka, iyo habka mashruuca laftiisa loo maareeyo nuugista. Taasi waa qashin aniga.
Ogsoonow inaan si gaar ah ula jeedo GNOME 3 iyo nacabkiisa Shell. Taas kuma jiraan GNOME 2, Mate, Qorfe, Consort, iwm.
Esque sidoo kale waxay tixgelinaysaa distro-ga aad isticmaaleyso, mashruuc laga yaabo inuusan helin aqoonsi cad wali waana mid loogu talagalay dhalinyarada, ku adeegsiga qashinka sida Arch waa khatar. Horita mashruucaasi waa mid dhalinyaro ah oo badh caasi ah, laakiin markuu qaan gaadho waxay u egtahay inay wax kale noqon doonaan.
Haddii aad rabto inay si fiican u shaqeyso, u beddelo distro sida Debian ah. Taasi waa laga yaabaa inaad leedahay.
Docks, widgets, furayaasha gaarka ah iyo kordhinta waxaad kuheli kartaa moodel desktop cusub oo shaqeynaya gnome 3.
Hase yeeshe, gnome 3 wuxuu leeyahay qaab wax ku ool ah, laga yaabee inaadan rabin inaad la qabsatid qaabdhismeedkaaga maskaxeed tan ama waxtar kuguma leh.
Heerka adeegsigu waa mid shakhsiyan ah, caddaynta tan ayaa ah inay jiraan kuwo badan oo naga mid ah oo adeegsada oo si fudud ku raaxeysta. Sida @lawliet kuu sheegay, waa inay ku xirnaataa qaybinta mid adeegsanayo, in kasta oo Gnome-shell uu leeyahay isku waji iyo wax qabad dhammaan.
Midkan u imanaya inuu dareen galiyo haba yaraatee ... halkee bay ka keeneen?
Waan kugu raacsanahay manuel ..
Ma jiraa qof garanaya sababta uu Alan Mcrae u sameeyay faallo ay dad badani u arkaan inay xun yihiin Manjaro?
By habka, mashruuc kasta oo ku saleysan Gnome waxaa loo qoondeeyay inuu lumiyo mustaqbalka fog, iyo xitaa in ka sii badan hadda sababtoo ah isbeddelada badan ee deegaanka.
Qof ii sharaxo maxaa yeelay waxaan u maleynayaa qorfe inuu qurux badan yahay. Hadda haddii aysan jirin koox horumarineed oo xasilloon oo ka dambeysa, waxyaabo ayaa si xun u socda.
Qaybinta sida Archlinux iyo waxyaabaha ka soo baxa waxay isticmaalaan desktop-kii ugu dambeeyay ee GNOME, hadda waxay ku jiraan GNOME 3.8.
GNOME iyo GTK (Maktabadaha loo adeegsaday inay abuuraan GNOME) barnaamijyayaashu waxay wax ka beddelaan Gtk API, iyaga oo aan siinaynin horumariyeyaasha kale waqti ay kula qabsadaan Foomadooda iyo barnaamijyadooda GNOME.
Hogaamiyaasha mashruuca GNOME isma fahmaan barnaamijyada kale ee FORK sida CINNAMON mana aqbalaan fikradaha barnaamijyada kale. Waxay qaataan isbeddelo xag-jir ah oo aan u oggolaanayn la-qabsiga Forks iyo codsiyada kale ee GNOME-da cusub.
Tusaale ahaan GNOME wuxuu ku jiraa nooca 'GNOME 3.8' wuxuuna adeegsadaa maktabadaha Gtlk 3.8. Halka qorfe loo qoondeeyay inuu ka shaqeeyo GNOME 3.6 oo uusan ku shaqeyn karin GNOME 3.8
Maaddaama mashruuca GNOME uu isbeddello xag-jir ah ku sameynayo GTK API iyo desktop-ka.
mana qaadaneyso waqti fargeeto kale iyo horumariyayaal inay la qabsadaan, waa inaad laqabsataa API-da cusub taasna waqti ayey qaadataa.
Taasi waa sababta CINNAMON ugu jiri doonin Cinnarch ee isticmaala GNOME 3.8
taas oo aysan ku habboonayn CINNAMON 1.6 /1.8 (oo si fiican uga shaqeysa GNOME 3.6).
Qorfe kuma jiri doono cinnarch, maxaa yeelay qorfe wuxuu ku saleysan yahay ubuntu iyo ubuntu ma lahaan doonto gnome 3.8 13.04, marka laga reebo ppa, iyagu ma xiiseynayaan inay u gudbiyaan, laakiin waxay noqon laheyd, wax kale ma jiraan.
Xalka Mint waa inuu dib ugu laabto fikirkii asalka ahaa: inuu qaato Gnome Shell oo uu "ku hagaajiyo" isagoo leh "qorfe" kordhin…. ma aha sidaas u adag in la ilaaliyo.
Ma arko in dadka gnome aad u daneeyaa waxay bulshada dhahdo.
Markii ay horumarinayeen gnome 3, dad badan ayaa ka soo horjeeday, maxaa yeelay waxay u arkeen inay tahay isbedel xagjir ah oo la xiriira gnome 2 ee nolosha, iyo xitaa sidaas oo ay tahay, waxay go'aansadeen inay u sameeyaan sidii ay rabeen, wixii ka baxsan waxa ay inta badan adeegsadayaashu u maleeyeen, waxayna ku dambeeyeen sameynta mamarracho loogu talagalay kiniinno, oo aan loogu talagalin miisaska miiska.
Cidna iskuma raacin inay ka saareen aragtida liiska kooban ee nautilus, maaddaama ay ahayd AAD loo adeegsaday, laakiin, iyada oo aan loo eegin waxa ay beeshu dhahday, waxay ka saareen shaqadan Nautilus, oo iyagu ayan joojin joojinta in ka badan iyo in ka sii badan oo aan laga dhigin .
Gnome 2, nooc, ficil ah, fudud, wax soo saar leh, oo loogu talagalay miisaska kumbuyuutarka.
Gnome 3, jerk.
Hagaag, uma arko midnimo inay tahay muraayad weyn oo loogu talagalay kumbuyuutarrada, runtii, aniga ahaan habka aasaasiga ah ee pc-ga waa kde iyo xcfe, kuwa kale, adeegsiga u dhexeeya midnimada iyo qolofta gnome waa arrin dhadhan shaqsiyeed.
Marna roob uma da'o qof walba sida uu u jecel yahay. Waxaan la qabsaday shirkadda 'Gnome Shell' oo mar dambe waxba ugama beddelin. Waxay aad iigu habboon tahay: desktop fiican, si dhakhso leh isu beddelaya, culus (oo aan lahayn "compiz" macno darro) iyo dammaanad qaadka bulsho wanaagsan oo ka dambeysa.
Maxayna aakhirka MATE yeelan doonaan fargeeto kale oo gnome ah….
Ku jawaab dbillyx
1.- Gnome ma aha miiska Icaza, ugu yaraan ma ahan 3, maxaa yeelay markii uu ka tagayay mashruuca waxay ahayd waqti dheer ka hor inta aysan noqon wadadii uu qaaday.
2.- Gnome wax eed ah kuma lihi, si kasta oo ay isula jaanqaad yar u lahaan karto, taasi waa khilaafkeeda waxayna ku saleysan tahay ujeedooyinka ay soo bandhigtay ee ah waxa aan ku ogaan doonno GnomeOS. Sababtoo ah taasi waa doqonimo sida loo yiraahdo Debian waa inay ka fekertaa waxa Ubuntu, Snowlinux, iyo tobanaankeeda gabdhood ee kale ay ku sameyn doonaan nidaamkooda.
Waa salaaman tahay, waxaan ku cusubahay Linux, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa Linux loo qaybinayo ay tahay sawirka.
ama sida looga tago Linux-kayga si sax ah isku mid ..
Jawaab si facundo
Casuumad loo fidinayo Xisbiga Siidaynta "Ubuntu 13.04" oo ay soo diyaarisay HumanOS